Diogo Jota oo fariin u diray ciyaartoyda Liverpool kaddib guushii ay ka gaareen Leicester City – Gool FM
(Liverpool) 23 Nof 2020. Xiddiga kooxda Liverpool ee Diogo Jota ayaa fariin u diray saaxiibadiis Reds, kaddib guushii ay xalay kaga gaareen naadiga Leicester City horyaalka Premier League ee dalka England.
Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Leicester City, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, ciyaar qeyb ka ahayd kulamada Toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Sida laga soo xigtay shabakada caalamiga ah ee “BBC” Xiddiga kooxda Liverpool ee Diogo Jota ayaa ciyaarta kaddib sheegay:
“U ciyaarista kooxdan heysata horyaalnimada adduunka micno weyn ayey leedahay, waxaan kaliya rajaynayaa inaan sii wadno guulaysiga kulamada, sidoo kalena muhiim ayaan ka noqon karaa.”
“Waxaan qabanay shaqo weyn oo weerar ah, waxaan abuurnay fursado, iyo sidoo kale difaacasho. Ugu dambeyntiina, waxay ahayd ciyaar weyn.”
“Koox walba waxay dareemeysaa isla dareenkan oo kale, qof walba wuxuu noqon karaa mid muhiim ah, waxaana u baahanahay qof walba inuu u diyaar garoobo jir ahaan iyo maskax ahaanba si uu noo caawiyo”.
Waxaa xusid mudan in Liverpool ay kujirto kaalinta labaad ee miiska kala sareynta horyaalka Premier League iyadoo leh 20 dhibcood, waxayna ka hooseeysaa hogaamiyaasha Tottenham Hotspur oo ay isku dhibco yihiin, balse farqi goolal ah hoggaanka ku heysa.